Ny famantaranandro fanairana maimaim-poana efatra ho an'ny Android | Androidsis
Ny famantaranandro fanairana maimaim-poana ho an'ny Android
Ny fialana eo am-pandriana no iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra inona no eto amin'izao tontolo izao. Azo antoka fa zavatra efa niainantsika rehetra indray mandeha farafaharatsiny. Soa ihany (na indrisy fa henoko ianao milaza), nantsoina hoe foronina isika famantaranandro fanairana. Misaotra ny famantaranandro fanairana, tsy tara izahay na aiza na aiza Na dia lasa zavatra ankahalaina aza ny fandehan'ny fotoana dia lasa lasa ampahany amin'ny andavan'andro.
rehetra telefaona efa tonga miaraka amin'ny fanairana / torimaso efa niorina. Azontsika atao matetika ny mametraka ny feo sy ny matetika. Fa raha tsy ampy izany dia manana ny safidintsika isika misintona fampiharana hanampy antsika hiala eo am-pandriana. Entinay eto ambany miaraka amin'ny safidin'ny famantaranandro fanairana maimaim-poana ho an'ny Android. Noho izany, ny fiakarana am-pandriana amin'ny maraina dia mety ho zavatra zaka kokoa.
rehetra Maimaimpoana ireo rindranasa atolotray eto ambany ireo. Saingy manome an-dry zareo anjara asa fanampiny koa izy ireo izay tena mahaliana azy ireo. Mampifandray ny fandidiana tsara izy ireo, ka afaka a safidy tsara alefa amin'ny telefaona finday. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
1 Puzzle amin'ny famantaranandro
2 Famantaranandro fanairana
Puzzle amin'ny famantaranandro
Atambatra ny lalao ati-doha miaraka amin'ny fiasan'ny famantaranandro fanairana ato amin'ity rindrambaiko ity. Fomba hafa hifoha maraina. Hahafahantsika mamantatra ny fitoviana, ny lamina na ny mitadidy litera sasany. Amin'ny ankapobeny fomba lalao isan-karazany, noho izany manana safidy maro isan-karazany isika hifoha amin'ny fampiharana ity. Mazava ho azy fa manana ny famantaranandro fanairana mahazatra.
Ary koa, io famantaranandro fanairana io misy maody manokana. Ny iray amin'izy ireo ho an'ireo matory. Izy ireo dia manome antsika safidy antsoina hoe: tampoka ny famantaranandro. Noho io fiasa io dia tsy maintsy ampahafantarintsika ilay fampiharana fa manaitra ny sasany isika 5 minitra aorian'ny nandriany. Fampiharana tena tsara. Raha mila fiasa fanampiny ianao dia azo atao ny mandoa vola kely fanampiny.
Ilay anarana mihitsy no manazava antsika ny fomba fiasan'ity fampiharana ity. Iray amin'ireo Safidy tsotra kokoa mety ho hitantsika ao amin'ny Google Play. Ny interface dia tena tsotra sy intuitive. Ka izany dia tena mora ampiasaina safidy. Raha ny momba ny fiasa fanampiny, dia manana izahay misy lalao misy. Ohatra, misy ny ankamantatra izay tokony hofaritantsika.
Ho fanampin'izay, ny fampiharana Manolotra fampahalalana momba ny toetrandro ihany koa izy io. Zavatra tena ilaina, na dia ratsy aza ny andro, dia vao mainka tsy te hiala amin'ny fandriana ianao. Raha mitady a fampiharana tsotra sy mivantana, no tadiavinao.
Mety ho iray amin'ireo safidy feno kokoa izay ho hitantsika ankehitriny. Hitady fomba isan-karazany hifoha amin'ity rindranasa ity izahay. Manana mozika isika, afaka misafidy feo ary koa horonan-tsary. Azonao atao ny misafidy ny iray izay hanampy anao hiala amin'ny fandriana. Misy a totalin'ny fanairana 50 misy.
Tsy io ihany no azon'ny AlarMon atao ho antsika. ihany koa afaka mamaky vaovao sy mahita ny toetr'andro ao an-tanànanao izahay. Izy io dia fampiharana izay manatanteraka ny fiasan'ny famantaranandro amin'ny radio. Tena ilaina ary miaraka amina endrika tsara. Ilaina ny manandrana azy farafaharatsiny, indray mandeha.
Iray amin'ireo Fampiharana malaza indrindra amin'ity karazana ity eny an-tsena. Azo antoka fa maro aminareo no nahita izany indraindray. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra, miaraka amin'ny mihoatra ny 10 tapitrisa alaina alaina. Ho an'ny zavatra tiany sy betsaka eo amin'ireo mpampiasa. Toy ny maro amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, isika dia manana safidy hifoha amin'ny alàlan'ny fanaovana lalao sasany na famahana piozila.
La interface tsara ny fampiharana angamba no tena misongadina indrindra. Izy io dia iray amin'ireo mareva-doko sy falifaly indrindra eo amin'ny sehatry ny famantaranandro. Raha mitady fampiharana ianao dia feno ary miaraka amina endrika tsara, avy eo mety hahaliana be anao ny ara-potoana.
Ara-potoana - Famantaranandro
Ity no safidintsika miaraka amin'ny famantaranandro fanairana maimaim-poana ho an'ny Android. Ireo rindranasa ireo dia manatanteraka ny lahasa izay ifohazantsika maraina. Saingy, manolotra antsika tsirairay avy izy ireo a andiana fiasa fanampiny. Misaotra izay mifoha fa zavatra mora kokoa, mahafinaritra ary zaka. Manantena izahay fa ity fifantenana ny famantaranandro fanairana ho an'ny Android mahaliana anao. Mampiasa ny iray amin'ireo rindranasa ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny famantaranandro fanairana maimaim-poana ho an'ny Android
Fabian Rivadeneyra Pinto dia hoy izy:
Miala tsiny fa tsy manana ny safidin'ny lalao sy ankamantatra i Timely
Valiny tamin'i Fabian Rivadeneyra Pinto
Ity ny OnePlus 5T ary ireto no miavaka farany
Football Manager Mobile 2018 dia azo alaina amin'ny Android izao